करिश्मा भन्छिन “मैले पढ्दैमा आश्चर्य मान्नु किन? पढ्न लेख्नलाई पनि उमेर चाहिन्छ र ?” – Karnalikhabar
करिश्मा भन्छिन “मैले पढ्दैमा आश्चर्य मान्नु किन? पढ्न लेख्नलाई पनि उमेर चाहिन्छ र ?”
काठमाडौं : ‘म ओली (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) जीको कदर गर्छु । उहाँको राजनीतिक चातुर्य र क्षमताको प्रशंसक पनि हुँ’, नायिका करिश्मा मानन्धरले भनिन्, ‘तर, उहाँलाई जनताले ८ कक्षा पढेको नेता भन्दा निको लाग्दैन ।’
नायिका करिश्मा आफ्नो पढाइलाई लिएर मिडियाले हल्का प्रचार गरेकोमा भने धेरै खुसी छैनन् । ‘किन यो प्रचारको विषय बनाउनुपर्यो, अनेक मान्छेले अनेक उमेरमा पढ्ने-लेख्ने काम गर्छन्, गर्न सक्छन् । यो त राम्रो कुरा हो नि ! पढ्न लेख्नलाई पनि उमेर चाहिन्छ र ? करिश्माले पढ्दैमा आश्चर्यजस्तो किन बनाउनु ? ‘
अघिल्लो - गाउँपालिका बजेट : खरको छानो भएका घरमा टिनको छानो
हरेक महिला आफ्ना श्रीमानसँग लुकाउँछन् यी ६ कुराहरु - पछिल्लो
एजेन्टले भनेको नमान्दा कतारमा बढी तलव पाएँ